Hamro Kantipur | सरकारको साँचो बोकेका माधव नेपालको शक्ति कति ? सरकारको साँचो बोकेका माधव नेपालको शक्ति कति ?
सरकारको साँचो बोकेका माधव नेपालको शक्ति कति ?
एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालले बनाएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ‘शक्ति’ र आधार कमजोर छ भन्नेहरूलाई उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । भदौ १२ मा पेशागत महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले पार्टीमा विद्रोह गर्नेहरूले नै ठूलो पार्टी बनाएको भन्दै आफ्नो पार्टीको शक्ति कमजोर नरहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे ।
उनले भनेका थिए, ‘कहिलेकाहीँ दक्षिणपन्थीले पार्टी कब्जा गर्छन् । कार्ल मार्क्सले पनि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दक्षिणपन्थीले कब्जा गरेपछि भंग गरे । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पनि दक्षिणपन्थीले कब्जा गरेपछि लेनिनले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बनाए । हामीले नेपालमा पनि विद्रोह गरेर नै ठूलो पार्टी बनाएका हौं । हामी चोइटिएका होइनौं ।’
उनले आफ्नो पार्टीको शक्ति प्रमाणित गर्ने सिलसिला उनको पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकमा पनि दोहोर्‍याए । केशरजंग रायमाझीले व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरेकाले पुष्पलालले विद्रोह गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाएको उदाहरण दिँदै त्यही सिलसिलाको निरन्तरतामा अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेमा केपी ओलीसँगको झगडामा माधव नेपाललाई साथ दिएका ‘दोस्रो पुस्ता’का नेताहरू नयाँ पार्टी बनाउने बेलामा छुटेपछि माधव नेपाललाई नयाँ पार्टीको ‘शक्ति’ प्रमाणित गर्ने चुनौती छ । माधव नेपालको साथमा ‘बिकाउ अनुहार’ नभएको र तेस्रो पुस्ताको जगमा मात्रै पार्टीलाई स्थापित गर्नु ठूलै चुनौती भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।
नेपालमा राजनीतिक दल विभाजन भएर सफलता हासिल गरेको उत्कृष्ट उदाहरण भने छैनन् । राजनीति सम्भावनाको खेल भएकोले नयाँ दलको सम्भावनालाई नकार्न भने नसकिने राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु बताउँछन् ।
माधवको खल्तीमा सरकारको साँचो
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसद्को चौथो ठूलो दल हो । तर, पनि सरकार र संसद् पूर्ण कार्यकाल चलाउने वा नचलाउने ‘निर्णायक शक्ति’ माधव नेपालकै कोर्टमा छ । माधव नेपालले चाहँदा सरकार र संसद पूर्ण कार्यकाल चल्छ, नचाहँदा देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ ।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘संसदमा माधव नेपालको पार्टी किङ मेकर हो । उनीहरू अहिले ‘डिसाइसिभ’ अवस्थामा छन् ।’
माधव नेपालको साथ नहुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धन अपूर्ण थियो । सरकार बनाए पनि चलाउन सक्ने अवस्थामा थिएन । संसदमा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सक्ने हैसियत माधव नेपालको साथ विना थिएन । त्यहीँ कारण पनि सरकारले संसदलाई कुनै ‘विजनेस’ दिन सकेको थिएन ।
आज संसदीय दलको बैठक सकेर बाहिरिने क्रममा नेपालले भनेका सबैतिर बहुमत पुगेकाले अब सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुने बताएका थिए । एकीकृत समाजवादीले कानूनी मान्यता पाएको र सरकारमा पनि सहभागी हुने भएपछि संसदमा सहज बहुमत जुटेको छ ।
सरकारको आयु निर्धारणमा एकीकृत समाजवादी निर्णायक भएकैले पनि गठबन्धनले माधव नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तर, राजनीति शास्त्रका अर्का प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भने पोखेलको तर्कसँग सहमत छैनन् । अहिले माधव नेपाललाई सत्ता गठबन्धनमा रहिरहने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । ‘दल दर्ता नगर्दासम्म माधव नेपाल किङ मेकर थिए । दल दर्ता गरेपछि गठबन्धनमा रहनु र सरकारमा सहभागी हुनु उनको बाध्यता हो,’ हाछेथुले भने ।
सरकारमा स्थान, सांसदको व्यवस्थापन
सरकारमा सहभागी हुँदा एकीकृत समाजवादीको करीब १५ जना सांसदले लाभको पद पाउने अवस्था देखिएको छ । सरकारमा उक्त पार्टीले राज्यमन्त्री सहित ६ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्न पाउँछ ।
एकीकृत समाजवादीका दुई जना सांसद संसदीय समितिको सभापति नै छन् । कल्याणी खड्का विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति छिन भने निरादेवी जैरू राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिकी सभापति छिन् ।
प्रदेश सरकारमा पनि उक्त पार्टीले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । बागमती प्रदेशको प्रमुखमा माधव नेपाल निकट यादवचन्द्र शर्मा नियुक्त भइसकेका छन् । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य एकीकृत समाजवादीमा नआए उनलाई हटाएर राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आन्तरिक तयारीमा उक्त पार्टी जुटिसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
उता प्रदेश–१ मा भर्खरै नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको विकल्प खोजी भइसकेको छ । उनलाई हटाएर एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन (भदौ ९)बाटै राजेन्द्र राईले उनको विकल्प खोज्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल थालेका छन् ।
बलियो भूगोल, युवाको साथ
नेकपा एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली खेमाको पेलानमा परेको थियो माधव पक्ष । केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि अवस्था उस्तै थियो । एमालेमा विवाद हुँदा माधव नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि चलायो । समानान्तर पार्टी समीकरण बनाउने निर्णय गरेको केही समयभित्रै करीब ७० जिल्लामा समानान्तर कमिटी बन्यो । त्यति चाँडै समानान्तर कमिटी बन्नुमा ओली पक्षको हेपाहा र पेलान प्रवृत्ति नै मुख्य रहेको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् ।
‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उकुसमुकुसको अवस्था थियो । केन्द्रमा जस्तै तल्लो तहसम्म प्रताडित थिए । केन्द्रमा समानान्तर गतिविधिको निर्णय हुने बित्तिकै उनीहरूले विद्रोह गर्ने आड भरोसा पाए । सोही कारण चाँडै धेरैवटा जिल्लामा समानान्तर कमिटी बन्न सफल भयो,’ पोखरेलले भने ।
माधव नेपाल स्वयंले पनि आफ्नो शक्ति जिल्ला तहका कार्यकर्ता नै रहेको बताउने गरेका छन् । शनिवार भएको पेशागत महासंघको कार्यक्रम र आइतवारको संसदीय दलको बैठकमा पनि उनले पार्टी निर्माणको आधार जिल्लाको कार्यकर्ता नै भएको बताएका थिए ।
‘समानान्तर कमिटीमा आशा लाग्दा र क्षमतावान युवाहरू छन् । धेरैले माधव नेपालसँग ठूलो नाम भएका नेता छैनन् भन्ने गरेका छन् । तर, पार्टीको सामर्थ्य ठूलो नामले मात्रै निर्धारण गर्दैन । यही कारण माधव नेपालको पार्टीलाई कम आँक्ने अवस्था देखिँदैन,’ पोखरेलले भने ।
चुनावी सहकार्य, गठबन्धनकै राजनीति
नेपालले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था छैन । २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्दा मात्रै उनीहरूले बहुमत ल्याउन सकेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका थिए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको नेतृत्वलाई धेरैले सराहना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोजेको तर वातावरण नपाएको अर्थमा उनको कार्यकाललाई लिइन्थ्यो । तर, निर्वाचनमा एमाले एक्लैको बहुमत आउने अवस्था रहेन । माओवादीसँग तालमेल गर्दा मात्रै ‘सिनर्जी’ सिर्जना भएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि पनि सरकार निर्माणको निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी नै थियो । भलै, संसदमा उक्त पार्टी चौथो स्थानमा थियो । एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि जसपा तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो ।
आगामी निर्वाचनमा पनि कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने अवस्था रहँदैन । सरकार सञ्चालनको लागि गठबन्धन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो हुँदा अहिले गठबन्धनमा रहेका केही दलले चुनावी सहकार्य गर्न सक्ने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । ‘एमालेसँग कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनावी सहकार्य गर्ने अवस्था देखिँदैन । बरु, उसको विरूद्ध मोर्चा बन्न सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले गठबन्धनमा साथ दिएका राजनीतिक दल नै निर्वाचन र त्यसपछिको सरकारको सहयात्री बन्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ठूला नेतालाई जिताउने गरी समीकरण बन्न पनि सक्छ । त्यसबेला एकीकृत समाजवादी निर्णायक दल बन्न पनि सक्छ ।’
एमाले बाहेकको वामपन्थी गठबन्धन बन्न सक्ने र त्यसबाट एकीकृत समाजवादीले शक्ति आर्जन गर्न सक्ने कुरामा प्राध्यापक हाछेथु सहमत छन् । ‘एमाले बाहेकको लेफ्ट शक्तिसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । तर, माधव नेपालसँग धेरै विकल्प भने छैनन्,’ हाछेथुले भने ।
एमालेको अहिलेको विभाजनलाई २०५४ सालको विभाजनसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिलेको निर्वाचनमा २०५६ सालको जस्तो नतिजा आउँदैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा केही न केही स्थान आउँछ नै,’ पोखरेल भन्छन्, ‘क्षेत्रीय र स्थानीय राजनीति पनि छ । त्यसले पार्टीको पोजिसन फरक पार्छ ।’
पार्टी एकीकरण र नेतृत्वको सम्भावना
संसदमा रहेको पाँचवटा कम्युनिष्ट पार्टीमध्ये तीनवटा एकातिर छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनमा छन् । एमाले विपक्षमा छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कसैलाई साथ दिएको छैन ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीचको एकताको विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ । निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएकै दिन उक्त पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरीले अरू पार्टीसँग एकीकरण गरेर ठूलो दल बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर, उक्त दलका अध्यक्ष माधव नेपालले भने संसदीय दलको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै तत्काल कुनै पनि दलसँग एकीकरणको सम्भावना नभएको बताएका छन् । एमालेकै केही नेताले माधव नेपाल अरू दलको कार्यकर्ता बन्न जान लागेको आरोप लगाए पनि नेपालले त्यसको जवाफ दिनका लागि पार्टी एकीकरण नहुने बताएक पनि हुन सक्छन् ।
तर, एकीकृत समाजवादीमा रहेका पुराना कम्युनिष्ट नेता प्रदीप नेपाल पार्टी एकीकरणको सम्भावनालाई नकार्दैनन् । केही अघिको भेटमा नेपालले प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले माधव नेपाललाई नेता मानेर नयाँ पार्टी बनाउने सम्भावना रहेको बताएका थिए ।
प्राध्यापक पोखरेल पनि पार्टी एकीकरणको सम्भावना नकार्दैनन् । ‘गठबन्धनमा भएका पार्टीको बीचमा एकीकरण हुन सक्छ । भएन भने पनि चुनावी गठबन्धन त पक्कै हुन्छ । त्यसले माधव नेपालको पार्टीलाई बलियो बनाउन बल पुग्छ ।’
विभिन्न समयमा पार्टी फुटेर चुनावको समयमा एकीकरण भएको इतिहास रहेका उल्लेख गर्दै प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘विभाजित कांग्रेस चुनावको बेला एकीकृत भएको इतिहास छ । २०५४ सालमा एमालेबाट विभाजन भएको बनेको माले २०५६ को चुनावमा शून्य सिटमा सीमित भएको अवस्था पनि छ । माधव नेपालको पार्टी त्यो भन्दा फरक अवस्थामा रहन पनि सक्छ,’ हाछेथुले भने, ‘हुन त माधव नेपाल दौडमा हारेको खेलाडी जस्तै हो ।’
तर, एमालेमा ओलीको नेतृत्व रहँदासम्म माधव नेपाल फर्कने सम्भावना नरहनेमा भने दुवै जना प्राध्यापक सहमत छन् ।
‘केपी ओली दक्षिणपन्थी बाटोमा छन् । उनको नजिकको सहयात्री दल भनेको कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । उनीसँग फर्किएका दोस्रो पुस्ताले पनि उनीहरूलाई सुधार्न सक्ने देखिँदैन । संसद विघटनको विरोध गरेकाहरूलाई सँगै राखेर संसद विघटन ठीक थियो भनिसके,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘एमालेमा उनलाई चुनौती दिने कोही भएन । एमालेमा उनलाई नेतृत्वबाट विस्थापित गर्ने पनि कोही भएन ।’
प्राध्यापक हाछेथु पनि ओली एमालेको नेतृत्वमा रहँदासम्म माधव नेपालहरू एमालेमा फर्कने वा चुनावी सहकार्य गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा बलियो सम्भावना देखिन्छ : मैनाली
पुराना कम्युनिष्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली एकीकृत समाजवादीले बलियो राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने सम्भावना देखिएको बताउँछन् ।
‘पार्टी बलियो हुनका लागि तल्लो तहमा मोटो र माथिल्लो तहमा सुरिलो आकार चाहिन्छ । अहिले केन्द्रमा उहाँको अवस्था राम्रो देखिन्छ । तल्लो तहका कस्तो संगठन बन्छ त्यसले माधव नेपालको सम्भावना देखिन्छ,’ मैनालीले भने, ‘अहिले सबै प्रदेशमा एमाले कमजोर हुँदै गएको छ । एमाले कमजोर हुनु भनेको एकीकृत समाजवादी बलियो हुनु हो ।’
एकीकृत समाजवादीको अहिलेको अवस्था हेर्दा पूर्व एमालेको ४० देखि ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्ने देखिएको मैनालीले बताए । ‘प्रदेशका कति सांसद एकीकृत समाजवादीमा रहन्छन् भन्ने कुराले उक्त पार्टीको शक्ति निर्धारण हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा बलियो हुने सम्भावना छ,’ मैनालीले भने । लाेकान्तरमा उद्वव थापाले लेखेका छन् ।